Izindlela ezi-7 zokuthola ama-curls angenakushisa "Amathiphu wezinwele – SL Raw Virgin Hair LLC.
Izindlela ezi-7 zokuthola ama-curls angenakushisa "Amathiphu wezinwele zemvelo"
Ukhathazekile ngokushisa futhi ufuna ukuthola ama-curls akhazimulayo ngaphandle kokufaka ukushisa? Nazi izindlela eziyi-7 zokuthola ama-curls angashisi ahlala e-bouncy futhi echaziwe.
Sep 06, 2021 | SL Raw Virgin Hair
Uma uthanda ama-curl, kodwa ungekho mayelana naleyo mpilo yokushisa kanye nokulimala okungenzeka kokushisa, nazi izindlela ezingu-7 zokuthola ama-curl achazwe kahle ngaphandle kokufaka ukushisa ezinweleni zakho.
1. Ama-Curls Angenakushisa ane-Flexi Rods Set
Qala ngezinwele ezinwetshiwe. (Ungafinyelela lokhu ngaphandle kokushisa ngokuluka ngemva kokugeza).
Faka amaconsi ambalwa kawoyela wezinwele ukuze uzigcine zizinhle futhi zibekwe phansi.
Hlukanisa izinwele zakho, uqale ngemuva, bese wengeza ukugoqa kwegwebu (okwanele nje ukuthi zimbozwe kancane).
Bese ufaka i-flexi rod ezinweleni ezihlukaniswe izingxenye. Ithiphu elilodwa lesethi ephelele ye-flexi-rod ukubeka phakathi kwenduku uhhafu wobude bezinwele ezihlukanisiwe. Bese, bopha izinwele kusuka maphakathi kuya eziphethweni kude nobuso bakho. Qinisekisa ukuthi iziphetho zakho ziphansi. Bese ugoqa phezulu kuze kuqine ekhanda lakho bese ugoba induku ukuze uyigcine isendaweni. Phinda uze uqede ikhanda lakho.
Vumela izinwele zakho zome - ngokwemvelo noma usebenzisa ifeni. Susa ama-flexi-rods, futhi voila, uchaze ama-curls ngaphandle kokushisa.
Hlukanisa ikhoyili ngayinye bese ugcona izimpande ukuze uthole ukubukeka okugcwele. Bese, uma uthanda, uqedele ngesilawuli somphetho.
2. Ama-Curls Angenakushisa anama-Curlformer
Ama-Spiral curlformer angenye indlela esheshayo yokuthola ama-curl ngaphandle kokushisa.
Sebenzisa umkhiqizo wakho wesitayela oyintandokazi. Faka ihuku ye-curlformer ku-curlformer, ufake izinwele ehukuni, bese udweba izinwele zakho.
Uma usuzidonsile izinwele, ungazishiya zinjengoba zinjalo, noma uzigoqe (cishe njengama-curlers endabuko ongawasebenzisa ngezinwele ezilukiwe). Uma wenza lokhu kwakamuva, qala ekugcineni, usonge umunwe, bese ugoqa ufike ekhanda lakho, bese udonsa isiphetho ukuze uvikeleke.
Uma umkhiqizo wesitayela womile, ungehlisa ama-curlformer.
3. Ama-curls angenakushisa anamafindo e-Bantu
Ikhredithi yesithombe: @teairawalker
Qala ngezinwele ezinwetshiwe. Gcoba amafutha alula bese uqala ngokuhlukanisa izinwele zakho. (Ungakwazi futhi ukwengeza ikhefu lakho phakathi futhi uhlukanise isigaba ngasinye njengoba usebenza.)
Phequlula izinwele zakho kusukela ezimpandeni, ucindezela phansi ngesikhathi senqubo. Bese uqala ukugoqa izinwele uze ufinyelele ekugcineni, lapho ufaka khona iziphetho ngaphansi.
Uma izinwele sezomile, yehlisa amafindo e-Bantu, athambile, futhi unama-curls aqinile, angashisi.
4. Ama-Curls Angenakushisa ane-braid-out
Indlela edumile yama-curl angenakushisa, ama-braid-out ayindlela esheshayo engadingi amathuluzi okugoqa.
Hlukanisa izinwele zakho zibe izindawo ezinkulu ezingu-6 noma ezingu-8.
Faka umkhiqizo wakho wesitayela oyintandokazi bese uluka izinwele zibe flat. (Isibonelo, ungenza ingxenye emaphakathi, i-braid flat ukusuka engxenyeni emaphakathi yehle iye emaceleni).
Linda umkhiqizo ukuthi wome (kufanele wome ngokuphelele ngaphambi kokuthi wehlise umluko). Gcoba uwoyela omncane esandleni sakho ukuze uvimbele ukuhwaqabala. Uma uthanda, ungasebenzisa nokulawula okuncane.
Bese uhlehlisa ngobumnene umluko ngamunye, uhlukanise umucu ngamunye njengoba uqhubeka.
Bese ungasebenzisa ikamu/ikhithi ukuze uguqule izimpande zevolumu.
5. Isilungiselelo serola esiyisisekelo
Ikhredithi yesithombe: @stylistlee
Inqubo ifana nesethi ye-flexi-rods.
Kungcono ukuqala ngezinwele ezinwetshiwe (nakuba kungeyona imfuneko).
Isigaba bese usebenzisa umkhiqizo wakho oyintandokazi wesitayela.
Kusuka ezihlokweni, gcoba izinwele ku-roller, bese ugoqa zize zifike empandeni., Bese uvikela i-roller ngekhava.
Uma izinwele sezomile ngokuphelele, bese wehlisa ama-roller, phaphama, futhi ujabulele ama-curls akho.
6. Izandiso Zezinwele Ezimagagasi Zemvelo
Ngesandiso sezinwele semvelo esifana ne-SL Izinwele Ezingamagagasi Eziluhlaza, awudingi ukuba wenze okuthile ngaphandle kokufaka lesi nqwaba yesandiso ukuze uthole ukucwebezela. , ama-curls ama-bouncy ngaphandle kokushisa.Kwenziwe ngezinwele zemvelo ezingu-100% futhi zenziwe kusengaphambili, ngeke ube nenkinga yokufinyelela uhlobo lwama-curls ongawathanda
Kulula ukuzifaka nesitayela, futhi njengoba ziza sezigoqiwe, kuyindlela enhle yokuthola ukubukeka okufunayo ngaphandle kokushisa noma umsebenzi.
7. Phina Ama-curls
Yebo, kunjalo. Ungathola ama-curls angashisi usebenzisa izikhonkwane zakho ze-bobby. Nansi indlela.
Qala ngezinwele ezimanzi noma ezimanzi, faka i-leave-in conditioner noma umkhiqizo wesitayela.
Bese uhlukanisa izinwele zakho. Uma izigaba ziba zincane, ama-curl aqina ngakho nquma ngosayizi owuthandayo.
Engxenyeni ngayinye, zisonge emunweni wakho, zigoqe phezulu ziye empandeni. Bese, usebenzisa izikhonkwane ze-bobby, zivikele endaweni. Uma izinwele zomile, susa izikhonkwane futhi uvule ama-curls. (Uma wenza ama-curls abe mancane futhi aqinile, vele ukhiphe izikhonkwane ukuze ungaphazamisi ama-curls.)
Futhi usunakho, izindlela eziyi-7 zokuthola ama-curls angashisi.
Zama ngayinye yalezi zindlela zokugoqa ezingashisi. Futhi uma ungathanda ukonga isikhathi esithile futhi uthole ama-curls ahlala isikhathi eside, bamba inqwaba yezinwele ze-SL Raw Natural Wavy ukuze uwenze ngomsebenzi omncane .
beauty tips and tricksbeauty trendsbeginners guidebouncy haircurly hair stylesDIYhair carehair care guidehair educationhair hackshair style guidehair tipshaircarehairstyle ideashairstyling tipsheat free curlsheatless hair curlsinstylelong lasting hairstylesnatural hairnight hair routine